8 TIPS FOR MOVING UP IN YOUR CAREER ﻿
8 TIPS FOR MOVING UP IN YOUR CAREER
သင့်ရဲ့ CAREER တွင် တိုးတက်မှုများရှိလာစေရန် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက် (၈) ချက်
စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ လက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ အခြေအနေထက် မြင့်မားတဲ့ရာထူးနေရာတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် လစာကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်ခုကို ရောက်လိုကြပါသလား? ဒီလို Career လမ်းကြောင်းအတွင်း တိုးတက်မှုများ ရှိလာစေဖို့အတွက် အလုပ်များကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်သလို နည်းဗျူဟာကျကျ Networking ပြုလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ ဆက်ဆံရေးများကိုတည်ဆောက်တတ်ဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ကံကောင်းဖို့လည်းလိုအပ်နေနိုင်ပါတယ်။
မိမိတို့ရဲ့ Career (သက်မွေးမှုလမ်းကြောင်း) တွင် တိုးတက်မှုများရှိလာစေရန်ပြုလုပ်ခြင်း
အကယ်၍ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတွင် ရာထူးတိုးပေးခြင်းခံရဖို့ကို လိုလားပြီး မိမိတို့အတွက် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ career လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးတည်ဆောက်လိုတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအချက်များကို သိရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် -
၁။ မိမိတို့ ဘာလိုချင်သလဲဆိုတာကို သိရှိနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်
သင်ဟာ C-suite (CEO, COO, CFO) ရာထူးတစ်ခုခုကို ရလာနိုင်ဖို့အတွက်ရည်မှန်းထားပါသလား? Team တစ်ခုကို စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်လိုပါသလား? သင့်ရဲ့ Job title အရှေ့မှာ “senior” ဆိုတဲ့စကားလုံးပါလာတာကို လိုချင်ပါသလား? သင်ဘယ်ကိုသွားရောက်လိုသလဲဆိုတာကို နားလည်သဘောပေါက်ထားပါက မိမိတို့ရဲ့ career လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ပိုမို၍တိုးတက်မှုရှိလာစေရန်အတွက် ကြိုးပမ်းချက်များကိုပြုလုပ်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယခုပဲ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပြီး ထိုနေရာသို့ရောက်စေရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်အစီအစဉ်များကို တွေးတောကြံဆလိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိနိုင်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မယ့်အရာများကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဆင့်အလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ တဖြည်းဖြည်းလုပ်ဆောင်သွားလိုက်ပါ။ ဥပမာ - နောက်ထပ် ဘွဲ့တစ်ခုထပ်ယူခြင်း၊ နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုများကို မြှင့်တင်ခြင်း (ဒါမှမဟုတ်) အခြားသောကုမ္ပဏီသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း အစရှိတဲ့အဆင့်များကို မိမိတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်လိုက်၍ လိုအပ်တဲ့စီစဉ်ဆုံးဖြတ်မှုများကိုပြုလုပ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းအကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်သွားလိုက်ပါ။
၂။ မိမိရဲ့ ရည်မှန်းချက်များကို ထုတ်ဖော်အသိပေးပါ
ပြီးနောက် သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်များကို အကြမ်းဖျင်းအနေနဲ့ သင့်ရဲ့မန်နေဂျာကို အသိပေး၍ထုတ်ဖော်ပြောကြားပါ။ ပွင့်လင်းမှုရှိပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာကိ အသိပေးပြောကြားခြင်းဟာလည်း သင့်ကိုအကူအညီဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေနဲ့ အနာဂါတ်တွင် ဘယ်ရာထူးအထိရောက်ရှိနိုင်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်သွားလိုကြောင်း သင့်ရဲ့မန်နေဂျာကို အသိပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သူ/ သူမအနေနဲ့ သင့်ကို အသွင်သစ်တစ်မျိုးနဲ့ ကြည့်ရှုလာနိုင်ပြီး စိန်ခေါ်မှုများရှိနိုင်တဲ့ အလုပ်ကိစ္စများကို သင့်ထံသို့ ပေးအပ်လာနိုင်တဲ့အတွက် သင့်အတွက်တိုးတက်မှုရှိစေပြီး ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုရှိလာနိုင်စေမယ့်အခွင့်အလမ်းများကို ရရှိလာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့မန်နေဂျာက သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို သိရှိထားတဲ့အခါမှာ သူ/ သူမအနေနဲ့ သင့်အတွက်အကျိုးရှိစေနိုင်မယ့် ဝေဖန်ထောက်ပြမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါဟာလည်း သင့်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ခိုင်မာကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးများကိုတည်ဆောက်ပါ
Career လမ်းကြောင်းများဟာ မိမိတို့နဲ့ သိကျွမ်းတဲ့သူများအပေါ်အခြေခံ၍ တိုးတက်မှုရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် relationship များတည်ဆောက်ဖို့ကို နောက်တွန့်နေမယ့်အစား အချိန်ယူ၍ သင့်ရဲ့မန်နေဂျာ၊ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ ပိုမိုရင်းနှီးမှုရှိလာစေရန် ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ခင်မင်ဖို့ကောင်းပြီး အကူအညီပေးတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါစေ၊ စကားစမြည်ပြောဆိုဖို့အချိန်ပေး၍ ကုမ္ပဏီအတွင်းကျင်းပသောပွဲများသို့ အမြဲတမ်းတက်ရောက်မှုပြုပါ။ အလုပ်များပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ဟာ အရေးကြီးသော်လည်း များသောအားဖြင့် လူ့သဘောသဘာဝအရ သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေသောသူများနဲ့သာလက်တွဲ၍ အလုပ် လုပ်ကိုင်လိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အထက်လူကြီးများနဲ့ ရင်းနှီးမှုရှိနေဖို့ဟာ အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Job Description ထဲတွင်ဖော်ပြထားတဲ့အလုပ်များထက် ပိုလုပ်ပြပါ
သင့်ရဲ့ Job description တွင်ဖော်ပြထားတဲ့ လုပ်စရာကိစ္စများကို အနည်းဆုံးပြီး‌မြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များဟု ရှုမြင်ထားပါ။ မိမိတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ အလုပ်များနေတဲ့အချိန်တွင် ကူညီပေးပြီး၊ မိမိတို့လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်ကိစ္စများကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်မှုရှိနေစေရန် ကြိုးစားပါ။
အထက်လူကြီးထံမှ အသိအမှတ်ပြုမှုမရပဲ အလုပ်များကိုဖိလုပ်နေရသူတစ်ဦးဖြစ်သွားစေရန်ကိုလည်း ဂရုပြုပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ကူညီပေးရန်အတွက် အချိန်ပိုဆင်းရတဲ့အခါ သင့်ရဲ့မန်နေဂျာကို အသိပေးထားပါ။ ထိုအချက်ကို တစ်ဦးခြင်း တွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ခြင်းများ (one-on-one meetings)၊ annual review ပြုလုပ်စဉ်နှင့် ရာထူးတိုးဖို့ (သို့) လစာငွေတိုးမြှင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချိန်များတွင် ပြန်လည်၍ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါ။
၅။ မိမိကိုယ်ကို ဦးဆောင်သူတစ်ဦးနေရာသို့ ရောက်ရှိလာစေရန် ကြိုးစားပါ
ဒါဟာ presentation များပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပရောဂျက်များကို ဦးဆောင်ခြင်းတို့အပြင် အစည်းအဝေးပွဲများတွင် လိုအပ်သည်များကို ဦးဆောင်ပြောကြားခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ကောင်းများကို မျှဝေခြင်းတို့ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး ယျေဘူယျအားဖြင့် မိမိဟာ ကုမ္ပဏီအတွက် အခက်အခဲတစ်ခုကြုံလာတိုင်း အကူအညီတောင်းနိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်လာစေရန် ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုများကို စနစ်တကျမှတ်သားထားပါ
ဥပမာ - ကုမ္ပဏီအတွက် ဝင်ငွေတိုးတက်မှုရှိလာစေရန် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း၊ Client များရရှိလာအောင် ဆွဲဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ကုန်ကျစားရိတ်များကို လျှော့ချပေးခြင်း အစရှိတဲ့ မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုများကို စနစ်တကျမှတ်သားထားပါ။ ကြွားဝါမှုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ အပိုပြောခြင်းကိုတော့ ရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပေမယ့် မိမိအနေနဲ့ တစ်ခုခုကို သိသာကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အခါတွင် မျှဝေပြောဆိုမှုပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ကုမ္ပဏီရဲ့ ရည်မှန်းချက်များကို အမြဲစဉ်းစားပါ
သင့်အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်ပေးလို့ရနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းပရောဂျက်များ များစွာရှိနေပါက ကုမ္ပဏီရဲ့ရည်မှန်းချက်များကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မည့် လုပ်ငန်းပရောဂျက်များကို အမြဲတမ်းဦးစားပေး၍ ဆောင်ရွက်ပါ။
ဒါဟာ suit ကို အမြဲတမ်းဝတ်ဆင်နေရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပေမယ့် မိမိရဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ အပြုအမူများကို ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ အခြားသောသူများမှ စံနမူနာယူနိုင်မယ့် role model တစ်ဦးဖြစ်နေစေဖို့အတွက် သပ်ရပ်စွာဝတ်စားဆင်ယင်၍ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ သင့်တော်၍ ကောင်းမွန်တဲ့အမူအကျင့်များကို မွေးမြူထားဖို့လည်း လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။